ကိုရွှေညာသား. . .ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေများနှင့် စာပေစကားဝိုင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ကိုရွှေညာသား. . .ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေများနှင့် စာပေစကားဝိုင်း
ကိုရွှေညာသား. . .ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေများနှင့် စာပေစကားဝိုင်း
Posted by alinsett on May 26, 2014 in Arts & Humanities, Creative Writing, Critic, My Dear Diary, Poetry | 24 comments
စာအကြောင်းပေအကြောင်း အလင်းဆက် ပြောချင်တဲ့စကား
စာအကြောင်း ပေအကြောင်း တွေးမိတွေးရာလေးတွေ ချရေးကြည့်ပါမည် ။
ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း မပြောနိုင်သေးခင်. . .ရသလောက် / တတ်သလောက် တွေးမိသလောက်ကို တီးကြည့်ခေါက်ကြည့်လျှင်လည်းအကျိုးရှိလိမ့်မည် ဟု နှလုံးသွင်း၍ ရေးပါသည် ။
သည်းခံ၍ ဖတ်ရှု လေ့လာပေးကြမည့်
အထူး အထူး ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
မြန်မာစာ/မြန်မာစကား. . .
ထို့ထက်ပို တဆင့်တက်၍ မြန်မာကဗျာ အကြောင်း ပြောကြည့်ဆိုကြည့်မည် ကြံတိုင်း
”ကာရန်”ဆိုသောအရာကို ထည့်ပြောချင်လာသည် ။
ကျွန်တော်တို့ ဘာသာ/စကားထဲမှာ. . .”ကာရန်”ဆိုသော အရာ
ရှိနေ၍ ပြောရခြင်းဖြစ်သည် ။
ထို့အပြင် ”ကာရန်”သည်. . .
ကျွန်တော်တို့ ဘာသာ/စကားနယ်ပယ်တွင် . . .သာမန်အနေအထားဖြင့် မထင်မရှားကလေး ရှိနေခြင်းမဟုတ်. . .
လူပြောသူပြောများသော. . .
အထင်ကရ ”နေရာ”တစ်ခု ဖြစ်နေခြင်းမှ . . .
အရင်ဦးဆုံးပြောရမှာက . . .
သတ်ပုံကိစ္စ ဖြစ်သည် ။
”ကာရန်” (Rhyme) ကို မြန်မာဘာသာစကား / မြန်မာစာဖြင့် ရေးလျှင် . . .
ကကြီး + –ာ= ”ကာ ”
ရကောက်+နငယ် + –်= ”ရန် ”
”ကာရန်” ဟု ရေးရပါမည် ။
ဒါမှ သတ်ပုံ မှန်ပါမည် ။
အကြောင်း သိပ်မသိသေးသူတချို့ က . . .
”ကာရံ” ဟု အလွယ်တကူရေးကြပြောကြတာကို တွေ့ နေရပါသည် ။
အမှတ်မှား/အရေးမှားခြင်း၏ အကျိုးရလဒ်အဖြစ် အဓိပ္ပာယ်လွဲပါလိမ့်မည် ။
စာစစ် စာပြင်မှု ရှိ၍ သတ်ပုံအမှားတို့ကို
တွေ့ ရခဲပါသည် ။
Online Media ဟု ခေါ်ဆိုရမည့်
web pageများပေါ်မှာတော့ ”ကာရံ ”
ဆိုသော သတ်ပုံအမှားကို ဖောဖောသီသီ တွေ့ နေရသည်။
မြန်မာဘာသာစကား/မြန်မာစာသည်. . .နည်းနည်းကလေး လွဲရုံဖြင့်. . .
အဓိပ္ပာယ် အကြီးအကျယ် ကွဲလွဲနိုင်သော ဘာသာစကားတမျိုးဖြစ်သည် ။
”က”ကို ” –ာ” ကလေးပင် ပိုရေးလို့မရ ။
” က ” တစ်လုံးတည်းဆိုလျှင် အဓိပ္ပာယ်က တမျိုး. . .
” ကာ ” ဆိုလျှင် အဓိပ္ပာယ်နောက်တမျိုး
” က ” နှင့်တော်တော် အဓိပ္ပာယ် ခြားနားသွားပြီ ။
မြန်မာစာသည်. . .
သတ်ပုံ မှားကောင်းသော စာ မဟုတ် ဟု
ကာရန် ။ ကာရန်သည် မြန်မာကဗျာသမိုင်းကြောင်းထဲမှ သူရဲကောင်းဟု ဆိုရမလောက် အားကောင်းမာန်ထည် ခဲ့သည်။
မြန်မာကဗျာတို့. . .ကာရန်မြစ်ပြင်ကြီးထဲမှာ ကူးကောင်းကောင်းနှင့် ကူးကြခတ်ကြသည် ။
မြန်မာကဗျာတို့ . . .ကာရန်ပန်းကို အလှဆင်မြန်း၍ မြတ်နိုးစွာ ပန်ခဲ့ကြသည် ။
မြန်မာကဗျာတို့. . .ကာရန်သီချင်းကို ဆိုကြသည်။
မြန်မာကဗျာတို့. . . ကာရန်ရနံ့ဖြင့်
မွှေးပျံ့ ကြိုင်သင်းခဲ့ကြသည်. . .။
ကဗျာနှင့် ကာရန် တသားတည်းကျပြီး ကဗျာခံစားသူတို့၏ နှလုံးသားကို ချိုသောအသံ. . .စီးသောအမျောတို့ဖြင့်. . .ဆွဲဆောင်သိမ်းပိုက်နိုင်
မြန်မာကဗျာအကြောင်း ထောင်းထောင်းထအောင်. . .ပြောကြသူတို့အကြား. . .
” ကာရန် ပါရင်. . .ကဗျာ / ကာရန် မပါရင်. . .စကားပြေ” ဟူသော စကား(သတ်မှတ်ချက်) တစ်ခုပင် အသံကျယ်ကျယ် ထွက်ခဲ့ပြီ ။
ကဗျာဆရာတို့သည်. . .ကဗျာဟူသည်ကို ခံစားချက်လှစ်ဟဖော်ပြခြင်း အနေဖြင့် ရေးကြသည်။
ဖတ်သူတို့ ရသ ခံစားစေလိုသောအနေဖြင့် ရေးကြသည်။
ပြောချင် ပြချင်တာတစ်ခုခုကို စာဖတ်သူထံ
ချပြလိုသော အနေဖြင့် ရေးကြသည် ။
ထိုသို့ရေးသားရာတွင်. . .ရှိနှင့်ပြီးသော . . .
အသုံးပြုရမည့်. . .ဘာသာစကား (မြန်မာစာသား)ကို သုံး၍ စီကာစဉ်ကာ ရေးချသည်။
သာမန်အတိုင်း(စကားပြေလို) မရေး ။
” ကာရန် ” ဆိုသော ပုံစံတစ်ခုထဲ ဘောင်ဝင်အောင် ချိတ်ဆက်ရေးသားလိုက်သည်။
” ကာရန် ” ”ခွင် ”ထဲသို့ စကားလုံးများကို စနစ်တကျ ပစ်သွင်း၍ ကဗျာရေးသည် ။
”သကျ ရူပံ | ကြံကြံသမျှ
ဝိဇ္ဇာသိပ္ပ | လူ့ ကိစ္စကို
ငယ်ကမသင် | ပျော်ပါးလွင်မူ
သဘင်မပြဲ့| ခံတွင်းမဲ့သို့
ချို့တဲ့ပညာ | ညှိုးမျက်နှာနှင့်
(ဝိဇ္ဇာသိပ္ပလူ့ ကိစ္စ/ပျို့ / အစပိုဒ်/
ထိုသို့ဖြင့်. . . .
ကာရန်ပါသော ထိုကဗျာသည် ဖတ်၍ကောင်းသော . . .
ဆို၍ ချိုသော . . .
စည်းကမ်းတကျ စနစ်ကျသော စာသားအစုအဝေးတစ်ခု ဖြစ်သွားသည် ။
တနည်းအားဖြင့်. . . ကဗျာဆရာမှ ပေးပို့လိုသော ဆိုလိုချက်ကို ကဗျာခံစားသူမှ ကျေနပ်စွာ ကူးယူခံစားနိုင်သော အနုပညာဖန်တီးမှုတစ်ခု (အနုပညာပစ္စည်း) အဖြစ်သို့. . .
ကဗျာကို ” ကာရန် ” ပါအောင် ရေးကြသည် ။
” ကာရန် ” မပါလျှင် ဘာဖြစ်မည်နည်း ။
(”ကာရန်” မပါလျှင် ကဗျာမဟုတ် ဆိုသော အယူအဆတို့ကို ချန်ထားခဲ့ပြီး. . .
”ကာရန်မဲ့ ကဗျာ” ဟု စွပ်စွဲသတ်မှတ်ကြသည့်. . .
”Modern Poem ” ”ခေတ်သစ်ကဗျာများ”ကို ယနေ့လူငယ်ကဗျာသမားတွေ
(Modernist များ ) က ဖန်တီးပြလိုက်သည် ။
ဗျာ / ပြေ ပြဿနာများ /သဘောတရားတိုက်ပွဲများ / အယူအဆကွဲလွဲသံများ . . .
ညံထွက်သွားသည် ။ )
တကယ်တော့. . .
ကဗျာမှာ ကာရန်မပါလျှင် ဘာဖြစ်မည်နည်းဟူသော မေးခွန်းသည် မေးစရာပင်မလိုတော့. . .
ကာရန်သည် ကဗျာကို ချိုအောင် ထည့်သော ဆေးတစ်မျိုး. . .
ကာရန်သည် ကဗျာကို လှအောင် အရောင်တင်သော ဆေးတစ်မျိုး. . .
စည်း / မျဉ်း / ဘောင် / ခွင် / သတ်မှတ်ချက် / စံနှုန်းတစ်ခုသာဖြစ်၍. . .
လက်တွေ့ဖန်တီးပြကြသည် ။
ကာရန်မဲ့ကဗျာတွေကို လူငယ်တွေ ရေးကြလေပြီ ဟု ဆိုကြသည် ။
ကာရန်ဆိုတာကြီးကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီ. . .ဟု
တချို့က ဟစ်ကြွေးကြသည် ။
သို့သော်. . . .ရပြီလား. . .
”ကာရန်”ကို တကယ် စွန့်လွှတ်နိုင်ပြီလား ။
”ကာရန်”ဆိုသော အငွေ့အသက်ကို တစိုးတစိမျှ ရှူရှိုက်စရာ မရှိပြီလား ။
”ကာရန်”ကို အခေါ်အပြောမရှိ / အတို့အထိ မရှိ. . . တိတိရိရိ စွန့်ပစ် လိုက်နိုင်ပြီလား ။
ထိုမေးခွန်းကို . . .
(ကျွန်တော့်တစ်ဦးတည်းသဘော)နှင့် ဖြေခဲ့ပါမည် ။
ကာရန်ကို မတို့မထိပဲ ကဗျာရေးလို့ မရပါ ။
သေလောက်အောင် စွန့်ပစ်ချင်နေလည်း ကင်းကွာအောင် ရေးလို့မရ ။
ကျွန်တော်တို့သည်. . .
ကဗျာကို ဤဘာသာစကား/ဤစာသားများနှင့် ဖန်တီးရေးသားနေသမျှ ကာလပတ်လုံး. . .
ကဗျာသည် ကာရန်နှင့် ပူးပူးတွဲတွဲ ရှိနေရပါဦးမည် ။
တတ်စွမ်းသလောက် ကျွန်တော် ရှင်းဆိုပါမည် ။
မြန်မာလူငယ်တွေရေးသော မြန်မာကဗျာ. . .
ဤခေတ် ဤအခါမှာ ဖြစ်တည်လာသော ဟန်ချက်အရ. . .
Modern ကဗျာများအဖြစ် လွတ်လပ်သော အစီးအမျောနှင့် ”ကာရန်” မပါအောင် ရေးသည် ဟု ဆိုကြပါသည် ။
သို့သော်. . . .
ဘာ စာ နဲ့ ရေးသလဲ. . .
မြန်မာစာဖတ်သူတွေအတွက် . .
မြန်မာကဗျာချစ်သူ ခံစားသူတွေဖတ်ဖို့. . . . မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် ရေးပါသည် ။
မြန်မာစာ၏ သဘောတရားနှင့်လက္ခဏာများကို ပြန်ကြည့်ရပါတော့မည်။
၇ ။ ။
မြန်မာစာ အရေးအသားသည်. . ကျယ်ပြန့်သည်နှင့်အမျှ ဝေဝါးမှုများလည်း ရှိလာသည်။
ဝေဝါးမှုများကို အသာထားပြီး ကျယ်ပြန့်သော အပိုင်းမှ ပွားယူသော စကားလုံးများ/ကပ်ယူသော စကားလုံးများ /
ကာရန်တူတွဲစပ်လိုက်သော စကားလုံးများ ရှိသည်ဆိုသော အပိုင်းကို သွားကြည့်ရပါဦးမည်။
မြန်မာစာတွင်. . .ကာရန်တူအတွဲအစပ်များ
ရှိပါသည်။ အသုံးများပြီး ရှောင်လွှဲမရလောက်အောင် ရှိနေပါသည် ။
ဥပမာ. . . .
”တုတ် ” ဖြင့် တွဲစပ်၍ ”ငုတ်တုတ်” /
”မတ်”ကို ကာရန်တူသော ”တတ်”ဖြင့် တွဲစပ်၍. . .”မတ်တတ်” /
”ရိ”ကို ကာရန်တူသော ”တိတိ”ဖြင့် တွဲစပ်၍ ” ရိတိတိ”
”ပြုံး”ကို ကာရန်တူသော ”တုံးတုံး” ဖြင့် တွဲစပ်၍ ”ပြုံးတုံးတုံး” /
”ငိုင်”ကို ကာရန်တူသော ”တိုင်တိုင်”ဖြင့် တွဲစပ်၍ ”ငိုင်တိုင်တိုင်” /
”စီစီ”ကို ကာရန်တူသော ”ရီရီ”ဖြင့်တွဲစပ်၍ ”စီစီရီရီ”/
”ပြောင်ပြောင်”ကို ကာရန်တူသော ”ရောင်ရောင်”ဖြင့်တွဲစပ်၍ ”ပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင်”/
စသည်ဖြင့်. . . . . . .
လမ်းထလျှောက်တယ်. . .
စီစီရီရီ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ကြေကွဲခြင်းတွေ. . . .
“ အလင်းဆက် ´´
ကာရန်တူ အတွဲအစပ်စကားလုံးများကို ဖောခြင်းသောခြင်း သုံးစွဲနေကြလေပြီ။
ထိုစကားလုံးများကို ရှောင်ကာတိမ်းကာ. . .မရေးပဲ ထည့်ရေးမိလျှင် ကာရန်ကို စွန့်လွှတ်ခြင်း မမည်။
ကဗျာကို ဖန်တီးလျှင်. . .”ကာရန်”နှင့် ကင်းအောင် ရှောင်နိုင်ပါ့မလား။
ဤဘာသာစကား၏ သဘောလက္ခဏာ အစဉ်အလာအသုံးအစွဲမှာကိုက
ကာရန်နှင့် မကင်းနိုင်လောက်အောင်. . .
ကာရန်ဆန်စွာ ပူးဝင်တွယ်ငြိနေမှတော့. . . .
၈ ။ ။
ကာရန်နှင့် လမ်းခွဲဖို့. . .
လမ်းခွဲပြီ လမ်းကွဲပြီဟု ဆိုကာ. .
”ကာရန်”ဟူသော စည်း မျဉ်း အခြား ဘောင် / ခွင်များကို စွန့်၍ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားတင်ပြနေကြလေပြီ ။
ယနေ့ခေတ် ကဗျာများကို ရှေးခေတ် အစဉ်အလာကဗျာသမားများက
”ကာရန်မဲ့ကဗျာများ ” ဟု အမည်တပ် တံဆိပ်ကပ်ကြပါတော့သည်။
ကျွန်တော် သိသလောက်တော့. . .
မော်ဒန်ကဗျာ ဆိုသော ယနေ့ခေတ်လူငယ်များရေးသည့်ကဗျာများသည်. . . ”ကာရန်မဲ့ကဗျာများ” မဟုတ်ပါ။
ယနေ့ခေတ်ကဗျာများ ကာရန်မဲ့ချင်သည် ဆိုလျှင်တောင် မမဲ့ပါ။
ကာရန် မဲ့၍ မရပါ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်. . . .
ကဗျာကို မြန်မာဘာသာစကား/မြန်မာစာ ဖြင့် ရေးသားနေသေးသ၍. . .
ကာရန်မမဲ့. . . .
”ကာရန်”ဆိုသည်ကိုက. . . .
”အသံ”ပဲ. . . မဟုတ်ပါလား။
” ကဗျာသည် . . . .
အသံ ဖြစ်သည် ။ ”
24 /5/ 2014 / 15 : 00
( မရမ်းကုန်း )
ဝိဇ္ဇာသိပ္ပလူ့ကိစ္စ ကဗျာမှာလေ “သခင်မပြဲ့” မဟုတ်ဘဲ “သဘင်မပြဲ့” များလားလို့ .
ဝိဇ္ဇာသိပ္ပ. . . ထဲက စာသားတစ်ပိုဒ်ကို ကျနော်
စာသားမှားရင် ပြန်ပြင်ပါ့မယ် ခင်ဗျ
အခုလို ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးထောက်ပြပေးတာ
အိမ်က စာအုပ်နဲ့ မူရင်းစာသား တိုက်မကြည့်ရသေးပါဘူး
သဘင်မပြဲ့ကအမှန်
အဲဒီ စာအုပ်ထဲ ပြန်ကြည့်လို့ သခင် ဖြစ်နေရင်တော့လား
ထောက်ပြ ပြင်ဆင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါလို့ ထပ်ပြောပါရစေနော်
Ba Kyaw says:
လာရောက် ဖတ်ရှုလေ့လာပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါဗျ
လာသွားကြောင်း comment ထားပေးခဲ့တော့
ဆက်ဆက် (ဘူသူ စခေါ်လိုက်တာလဲ တော့မသိ။ ခေါ်ကောင်းလို့ ခေါ်ပြီ)
အရီး က ကဗျာနဲ့ ဝေးလို့ သူများတွေ လှလှလေး ရေးနေ ချိုချိုလေး ရွတ်နေတာ တွေ ကိုဘဲ အားကျနေပါတယ်။
အားလဲ ပေးပါတယ်ရှင်။ :-)))
ကိုရင်ဆက်ဆက် လို့ စခေါ်တာက သဂျီး
ဆက်ဆက်ပန်ထုံလို့ အနောက်သန်ပြသွားတာက ဂီဂီ
ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ် ချစ်စနိုးဦးနဲ့ ခေါ်တာပဲ
အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ အရီးရေ
ကျွန်တော်လည်း ၀င်ဖတ်သွားပါတယ် အလင်းဆက်ရေ…။
သတ်ပုံ ၀င်ပြင်ပေးသွားတဲ့ တစ်ခုတည်းသောကွန်းမန့်ရှင်
Mi Phyu ကိုလည်း လေးစားပါတယ် ခင်ဗျာ…။
ဆရာနေဇင်လတ် ပေတံနဲ့ ပြောရရင် ညီလေး ညံ့ပြီပေါ့ကွယ်…။
ဆိုတော့ သူများတွေကို သတ်ပုံမမှားသင့်ဘူး လို့ ပြောနေတဲ့နေရာမှာကိုက
ကိုယ်က စာသားမှား ဖော်ပြလိုက်တယ်
ဒါပေမယ့်. . .
ကာရန် ပါ ရင် မင်းဆီကို ¿ ¿ ¿[သီချင်းဖျက်]
တိန် တိန် နှစ်ခါတိန်
ကာရန်​ အင်း ကာရန်​​ပေါ့​လေ ကာ ဆိုတာက တစ်ုခုကို ကာထားတာလို့ ​ပြောရင်​ရမလား ။ ရန်​ ဆိုတာက – န်​ ဖြစ်​တဲ့ အတွက်​ အရံအတား မဖြစ်​နိုင်​​တော့ ဘူး ။ အရန်​ / အပို​ဆောင်​ထားတာများလား ။ ​နောက်​ ရန်​အန္တာရာယ်​ များ ဖြစ်​​လေ မလား ။ ​ပေါ့ ​လေ
ဘာပဲ ဖြစ်​ဖြစ်​ပါ ။ ကိုယ်​က​တော့ ကဗျာ ​ရေးရာမှာ ကာရန်​ ​နောက်​ကို မလိုက်​မိတာက​တော့ အ​သေအချာပဲ ။ ကာရန်​ ကို ဦးစား​ပေးပြီး ကဗျာပါဒ ကိုချမ​ရေး ဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ ။ အသံ စီးချင်း မှု ​ပြေပြစ်​ရင်​ ရစ်​သမ်​ Rhythm ဖြစ်​တာပဲ ​လေ ။ ဒီ ​တော့ ကိုယ်​​ရေးတဲ့ ကဗျာ​တွေမှာ စာလုံး​ပေါင်းနဲ့ ကာရန်​ လိုက်​ရှာ​နေရင်​ ​တွေ့ချင်​လဲ ​တွေ့မယ်​ ။ ​တွေ့ချင်​မှလဲ ​တွေ့မယ်​ ။ ကာရန်​နဲ့ Rhythm မတူဘူးနဲ့ တူပါတယ်​ ။ ကာရန်​မှာ ​လေး သုံးနှစ်​ တို့ ဘီလူးရယ်​ တို့ ချိန်​ခွင်​လျှာ တို့ အတိအကျ သတ်​မှတ်​ထားတာ ရှိ​ပေမဲ့ Rhythm မှာက ဘယ်​နှစ်​လုံး​မြောက်​မှာ အသတ်​ညီ ရမယ်​ ။ အသံတူရမယ်​ သတ်​မှတ်​ထားတာ မ​တွေ့ ဖူး​သေးဘူး ။ မ​တွေ့ဖူးတာ ​ပြောတာ​နော်​ ။ မရှိဘူးလို့ ​ပြောတာ မဟုတ်​ ။
ကာရန်​ ​ရေ​သေအိုင်​ထဲကထွက်​ပြီး ရစ်​သမ်​RHYTHM ​ရေစီး​ကြောင်းမှာ လွတ်​လပ်​စွာ ​မျောပါ​နေချင်​တဲ့
သင့်​ – ​နေ၀န်းနီ
ကာရန်​ ​ရေ​သေအိုင်​ထဲကထွက်​ပြီး ရစ်​သမ်​RHYTHM ​ရေစီး​ကြောင်းမှာ လွတ်​လပ်​စွာ ​မျောပါ​နေချင်​တဲ့…
ဆိုတဲ့ စကားကိုတော့ သဘောကျလွန်းသွားပြီဗျို့ … ။
အဘနီရဲ့ ကဗျာတွေကို… ကျနော် ကြိုက်တယ်ဗျ… ။
စာပေ စကားဝိုင်း ဆိုတော့လေ
သများ မဝင်ရဲလို့ မဝင်တော့ဘူး နော်။
အသောက်ဝိုင်းတို့ (အအေး ပြောပါတယ်)
ဖဲဝိုင်းတို့ ဆိုရင် သာ ခေါ်လိုက်။
ဒါနဲ့ ဒီ ပို့(စ) အ တွက် Two Thumbs Up~
အောင်ရဲ လင်းတောင်..ကျနော့်လောက်အောင်ရဲလင်းနဲ့ မတူဘူး..ဆိုတာကို..
ဒါက အတည်အခန့် တွေ ရေးနေရလို့ …
ကဗျာနှစ်မျိုးလုံးကို မရေးတတ်ပေမဲ့ နှစ်သက်ပါတယ်…ဒါပေမဲ့ ကာရန် နဘေ ပါတဲ့ကဗျာတွေက
နားဝင်ချိုပီး အလွတ်ရအောင်စွဲစေပါတယ်….ဒါကြောင့်လည်း ကျောင်းတုန်းက ကဗျာတွေကျက်လို့
အလွတ်ရခဲ့ကြတာပဲ…အဲ့ လိုမဟုတ်ပဲ…ခု အလက်ဆင်းတို့ ကိုနေတို့ ရေးတဲ့ကဗျာမျိုးတွေများ
အခုခေတ်ကဗျာစာသားလေးတွေကို ပို အလွတ်ရနေတယ်ဗျ
ဘာစာဖြစ်ဖြစ် အထူးသဖြင့် ကဗျာမယ်တော့ ကာရံပါမှကြိုက်သကွဲ့။ ကျန်တာတော့ ဗဟုသုတအနေနဲ့ပဲ မှတ်သားသွားတယ် အောင်လင်းဆက်ရေ
ဒါ ကဗျာလား သဂျီး
အလက်​ဆင်း ​မောင်​ရင်​ကြားဖူးသလား မသ်ိ ။ ​လောကမှာ ကဗျာဖွဲ့မရတဲ့ အ​ကြောင်းအရာမရှိတဲ့ ။ ဘာသာရပ်​တိုင်း ဟာကဗျာမှာ ​ပျော်​၀င်​မြဲတဲ့ အဲ့​တော့ ကဗျာ​ရေးမယ်​ကြံရင်​ ကိုယ်​ကိုယ်​၌ က အ​ကြောင်းအရာတိုင်း ဘာသာရပ်​တိုင်းမှာ အာရုံဝင်​စားနိုင်​ဖို့လိုတယ်​ ။ ကဗျာ​ရေးတဲ့ သူက သူမသိချင်​လို့ စိတ်​မ၀င်​စားတာပဲရှိမယ်​ ။ သူမသိဘူး ဆိုတာမရှိဘူးလို့လဲ ဆိုထားသဗျ ။
ကဗျာဖွဲ့ လို့ မရတာတော့မရှိ
ဒါပေမယ့် လူတိုင်းကတော့ ကဗျာ မဖွဲ့ နိုင်